Lo mpristi wanikeza impendulo ejulile njengokuqonda, wathi: "Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wadabukisa kakhulu ngakho konke lokhu, okungenani kakhulu njengoba sasinjalo, kodwa sekungamakhulu eminyaka sitshela uNkulunkulu ukuthi akaphume ezimpilweni zethu."
Ngoba, ngokwenza inkolo yama-Arabhu kanye nabelungu siqinisa i-egregore yama-Ancestors abo futhi ngasikhathi sinye senza buthaka i-egregore yabantu Black / Afrika.
Singathemba kanjani ukuthi okhokho bethu bazosinika isibusiso nokuvikelwa kwabo uma siphikelela ekuthandazeni kuma-Ancestors of White and Arabs?
Mayelana nemicimbi ephindaphindayo (ukuhlasela kwe-Afrika, ukuqothulwa kohlanga, ukuhweba ngezigqila ngama-Arabhu ama-Arabhu, ukuhweba ngezigqila kwase-Europe-Christian, amakoloni, izimpi ze-Islamization kanye nobuChristian, ukubhujiswa kwesiko lokomoya, isayensi, amasiko nobuchwepheshe base-Afrika, ukweba i-Afrika, ukuqamba amanga kanye nokwabiwa komlando ohlonishwayo wama-Afrika, izingulube zesiguquli somuntu, ukushushumbiswa kwezitho, ukudlwengulwa, njll. )
Labo abasenza inkolo yamaSulumane noma yobuKristu baye bathi asisafanele siphqinisekisa amasiko ethu engokomoya nesiko lethu egameni labaprofethi negrophobic.
Ngoba ngokusho kwalawa ma-Afrika afanayo, enza okungokomoya kwethu, amasiko namasiko ethu, eza ngaphansi kobuthakathi, ubuSathane. Ngokusho kwabo, kungokwamademoni futhi ngamademoni.
Ama-Afrika la akhipha umyalo wokuthi isazi sama-Arabhu noma esimhlophe kufanele sazi ukuthi sikhuluma ngani noma ngabe yini asitshela yona futhi kufanele sithi yebo.
Manje sizibuza ukuthi kungani izingane zethu zingazi, kungani zingakwazi ukuveza umehluko phakathi kokuhle nokubi, kungani zingabulala imizwa ngaphandle komzwelo, zibe nemikhuba yezocansi engeyona eyemvelo, zidle utshwala, izidakamizwa.
Ngokunokwenzeka, ukuthi ngokubonisa ukucabanga okujulile, sizofinyelela esiphethweni sokuthi siphathelene nomgomo 'wokuvuna lokho esikuhlwanyele. "
Kuyahlekisa ukuthi kulula kanjani ngathi ma-Afrika ukwenqaba okhokho bethu bese sizibuza ukuthi kungani sisengcupheni, kungani sesiphenduke insini yabanye abantu, kungani bonke abanye abantu besenza ukuthi bafuna.
Izwe lethu leli pharadesi elasinikelwa okhokho bethu seliphenduke isihogo, lapho sikholwa ukuthi konke okushiwo abezindaba kanye “nochwepheshe” babo base-Afrika futhi siyaqhubeka nokuhamba siyilahla imizana yethu okuyindawo yethu engcwele .
Sibuza kunanini ngaphambili ngengokomoya lethu ukuthi:
Kuyahlekisa ukuthi singayithumela kanjani imiyalezo esebhayibhelini nge-Facebook noma ngocingo olusakazeka njengomlilo wasendle, kepha uma sithumela imiyalezo ngoNkulunkulu evela kokhokho bethu, abantu abacabangi ngisho nokwabelana ngayo.
Kuyahlekisa ukubona ukuthi izindatshana ezingenamahloni, ezinamahloni, ezinenhlamba nezichaphayo zisakazeka kalula nangokukhululeka, kepha izingxoxo zomphakathi zeMimoya yethu zivinjelwe emindenini yethu, ezikoleni nasemabhizinisini.
Futhi ngeke ngimangale uma ungawifundanga wonke lo myalezo ngokuphelele, futhi cishe ngeke uwuthumele kubantu abaningi encwadini yakho yamakheli ngoba awazi ukuthi yini, bakholelwa yini noma yini 'bazocabanga ngawe.
Kuyishwa ngempela ukuthi sikhathalela kakhulu ukuthi abantu bacabangani ngathi, mKepha uma ulahla le nqubo yokucabanga, ungakhonisi ngesimo esingesihle somhlaba esiphila kuwo kanye nesimo esimpofu sase-Afrika.
Sengathi okhokho bethu bangahamba nathi!